Nzuzo maka ịde blọgụ na ụzọ gị maka ego isii
Ebe m bidoro akwụkwọ nke m oge ụfọdụ gara aga, amaara m na ọ na-esiri m ike ịdebe blọgụ ma hazie ihe niile m mụtara banyere ịde blọgụ na mgbasa ozi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
O yiri ka Darren Rowse nke Problogger emeela nke ahụ, ọ bụ ezie. M na-elele blog nke Darren ka ọ pụọ, ị wee hụ nnọgidesi ike na nghọta nke ọhụụ nke Darren ghọrọ ihe dị egwu maka ndị na-ede blọgụ. Problogger O doro anya na ndepụta 'ga-agụ' ndepụta nke faili ntanetịime ma ọ nweghị nganga na etu ọnụ Akpụkpọ ụkwụ na John Chow (ọtụtụ ịhụnanya n'ebe ndị ahụ nọ, ọ bụ ezie na… M na-agụ blọọgụ ha, oke!).
Nke a bụ nkọwa nke akwụkwọ sitere na Amazon:
De blọgụ aghọwo oge na-ewu ewu ma na-adọrọ mmasị maka ọtụtụ, mana ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-achọta na ọ pụkwara ịbụ ezigbo isi iyi nke ego ma ọ bụ nke na-enweghị isi. Ọ bụ ezie na ihe mgbochi ịmalite blog dị obere, na-enweghị nduzi ọkachamara, ọ na-adị mfe iwe iwe ma ọ bụrụ na ịga nke ọma adabaghị na atụmanya. Edere site na onye okike nke ihe ntanetị # 1 nke ụwa iji nweta ego na blọọgụ, ProBlogger na-ewepụta onye na-agụ ya site na mbido zuru oke iji nweta ego ma ọ bụ n'ihi ịde blọgụ. Site na nkuzi nkuzi nke ọ bụla onye na - agụ ya ga - ahọrọ isiokwu blog, nyochaa ahịa, melite blog, kwalite ya ma nweta ego.
Ekele Darren na Chris na nke a isi ọhụrụ na akụkọ Problogger! Ọ dị na Ndepụta M Chọrọ!
Tags: akwụkwọdara ụdaproblogger
Douglas, daalụ nke ukwuu maka ịkọ akwụkwọ ProBlogger. Ọ bụ ezigbo ọrụ na Darren na Chris, ma ugbu a, akwụkwọ a dị n'ụzọ ihe si atọ ụtọ.
Yabụ, ụdị akwụkwọ ị na-ede?
John Wiley & onsmụ
Enweela m ihe dị ka akwụkwọ peeji 40 - 50 bidoro etu esi emejuputa blog site na iji omume kachasị mma maka ntinye igwe, nyocha, na atụmatụ. M emetụbeghị ya aka obere oge ịkwụwa aka ọtọ!
ekele maka aha Douglas - nwee ekele maka ya.
Bet nzọ, Darren! Kẹle Ojejoje ekfu ndono!